Umthandazo ndingumoni Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La Umthandazo mna moni Yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ngaphakathi kwinkolo, ungayisebenzisi nje ukuguquka phambi koThixo, kodwa njengendlela yokuvuma izono ezenziwe phambi komntu ophethe ibandla. Kodwa ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngalo mthandazo, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda inqaku elilandelayo.
1 Ukubuza malunga noMthandazo woMoni
2 Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukuqala iMisa ngalo mthandazo?
3 Umthandazo wesintu "NdinguMoni"
4 Zeziphi izono ezibulalayo ezikhoyo?
5 Iingqukuva ezisixhenxe ezinzima
5.1 1. Ikratshi:
5.2 2.- Umsindo:
5.3 3. - Ukubawa:
5.4 4.- Umona:
5.5 5.- Inkanuko:
5.6 6.- Ubuncwane:
5.7 7.- Ubuvila:
Ukubuza malunga noMthandazo woMoni
Lo mthandazo kulwimi lwaseSpain waziwa ngokuba "ndingumoni" okanye "ndiyavuma", osetyenziswe kwisithethe samaRoma ukulungiselela abantu, yinxalenye yesenzo senkolo apho abantu bavuma khona izono zabo kwaye bacele abangcwele ukuba bakuxolele umphefumlo. Uyaziwa nakwinkonzo yamaTshetshi nakwiinkonzo zamaLuthere.
Imele indlela yokucela ukuxolelwa kumbingeleli okanye umntu ophethe icawa kuqala kunye neyesibini kubo bonke abathembekileyo abathatha inxaxheba kwisenzo senkolo.
Ukusetyenziswa kwesi sivakalisi kukwaziwa njenge "intoning the mea culpa", ngenxa yamagama ayenzileyo, kunye nokubetha kathathu ngokulandelelana okunikwa yicawe xa ephindayo, kungumqondiso wenguquko bayabandezeleka kamva kwisono sabo.
Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukuqala iMisa ngalo mthandazo?
Lo mthandazo umele ithuba elikhethekileyo lokuqalisa ukudibana neNkosi kwaye ukwazi ukushiya ngasemva zonke izono okanye ukwenza ngokuchasene nomthetho kaThixo, ukwazi ukumamela igama elingcwele kunye nokubhiyozela iMisa, ukhululwe kulo naluphi na uvakalelo olungathinteliyo. kubo.
Ngale ndlela, umntu ngamnye kule ndawo ngokuthobekileyo uyavuma izono abazenzileyo, ngelixa evula iintliziyo zabo phambi koThixo. Nangona kunjalo, imfuneko yokuthandaza phakathi kwabazalwana abasezulwini okanye abasecaleni kwethu nayo iyaqatshelwa, samkele ukuthandazela ngamnye kubo, silawule ukwabelana kunye nokuphila ubomi besono kubuzalwana.
Ke iyasinceda ukuba siziqonde izenzo zethu ezimbi kunye neengcinga zethu kubazalwana bethu nakuThixo. Ukulawula ukujonga ukusilela kunye nokulunga esinako.
Umthandazo wesintu "NdinguMoni"
Ndiyavuma phambi kotata usomandla naphambi komzalwana ngamnye okhoyo, ukuba ndonile ngelizwi, ukushiya, ukucinga kunye nokwenza. Ngenxa yam, ngenxa yam, ngenxa yesiphoso sam esikhulu, endicela ngaso iNtombikazi enguMariya, abangcwele, iingelosi kunye nomnye wabantakwethu ukuba bandicenge, phambi kweNkosi uBawo, Amen.
Zeziphi izono ezibulalayo ezikhoyo?
Inkolo yamaKatolika yenza izono ezinkulu njengeendlela zokunceda umntu ngamnye, ukuba achonge kwaye ayeke iimvakalelo ezimbi okanye utyekelo olubi ngaphambi kokuba azenze. Umzekelo, unxibelelwano phakathi kweziyolo zehlabathi zomntu, imikhwa emibi, umnqweno kunye nesono.
Kwimeko yezokwabelana ngesondo, inkolo yamandulo yaguqulwa kwaye yagqwethwa kwindlela yokubona ubuJuda bubhekisa kwisini. Oku, ngokungafaniyo nobuKristu, akubonisi naluphi na uhlobo lweentloni emzimbeni womntu kwaye ubudlelwane bezesondo ngaphandle kokuzala buvumelekile.
Nangona kunjalo, abaxhasi ubudlelwane bezesondo phakathi kwabantu beenkolo ezahlukeneyo kuba ukuze benze oko, kufuneka batshatile. Eyona nto ibalulekileyo kule nkolo kukuba ukuba umfazi ongumJuda wenza ubudlelwane bakhe nendoda engengomYuda, abantwana abazalwa kolu lwalamano bahlala bengamaJuda, ngenxa yomthetho wesibeleko.
UbuJuda abuvumeli naluphi na uhlobo lobudlelwane bezesondo nabantu abangaphandle komtshato, ngokugcina iileta izibhalo zebhayibhile ezinxulumene nalo msitho, kubandakanya ukuthintela ubudlelwane bezesondo ngexesha lokuya exesheni. Ukujonga ubungqingili kunye nesalamane njengesono esibi
Nangona kunjalo, kubukristu buvumela ukuseka phakathi komnqweno wesini kunye isono sokuqalaIhluke ngokupheleleyo kubuJuda, ngenxa yesi sizathu singezantsi uya kuba nakho ukubona ngeso lengqondo izono ezisixhenxe ezibulalayo ezilungiselelwe kwimibhalo, kwimizobo nakwimifanekiso eqingqiweyo efumaneka kwiindawo zecawe.
Iingqukuva ezisixhenxe ezinzima
Ngaphandle kwamathandabuzo ingumthombo ophambili wezinye izono, uboniswa njengomnqweno wokuba nomtsalane ngakumbi okanye obalulekileyo kunabanye abantu, ukuphelisa ukubanakho ukuncoma abanye abantu.
Le yimvakalelo eqala kwintiyo kunye neemvakalelo zomsindo, ezinokubonakaliswa ngokukhanyela inyaniso kwabanye okanye ngokwakho. Namhlanje, umsindo uquka ukunganyamezelani kunye nocalucalulo, yiyo loo nto ukubulawa kwabantu kunye nokubulala kungafunyanwa kuwo.
3. - Ukubawa:
Sisono nje esinxulumene nokugqithisa, ngenxa yoko sinobudlelwane obusondeleyo nobudlakudla, inkanuko kunye nokufunyanwa ngamandla kwezinto okanye ubutyebi ngezixa ezibaxiweyo, kunye nobundlobongela, ukunyoba, isimoni, ukubetha, ukuxoka, phakathi kwabanye.
Esi sono sibonakaliswa ngumnqweno infinito lokuba nepropathi yomnye umntu, ukhatshwa ngokubanzi kukuziva ukuba le meko ayifanelekanga okanye ayifanelekanga emehlweni abo. Konke oku kubangela ukuba umntu anqwenelele ububi kummelwane wakhe, akwazi ukuziva anelisekile xa ebona ukuba kukho into embi eyenzekileyo kuye.
Inkanuko ithathwa njengokugqithisa komnqweno ongalawulekiyo wesini, ukungena kudidi lobundlobongela nokukrexeza. Ngokwezinye iingcali ezifana noDante Alighieri, uchaza inkanuko njengothando komnye umntu, ebeka uThixo ngasemva.
Iyachongwa kwaye inxulunyaniswa ngokusondeleyo nokusela kakhulu iziyobisi okanye ukutya, kodwa ngaphambili nayiphi na into egqithisileyo yathathelwa ingqalelo kukutya. Ngaphakathi kwesi sono sinokufumana iziyobisi, utywala kunye ne-bulimia.
Ngaphandle kwamathandabuzo esona sono sigqibeleleyo sikhona, kuba sinxulumene nokungakwazi ukuthatha uxanduva okanye ukwamkela ubukho bomntu omnye.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi okungakumbi malunga isono sokuqala, imvelaphi kunye neentsingiselo, kunye nezinye izinto ezininzi malunga nabo, siyakumema ukuba undwendwele inqaku lethu.